Kaneti dzinodzokororwa dzinoda kutsiviwa kazhinji, nekuti dzakasimba kwazvo. Kubvisa canisters kunozivikanwa seyero yekuyera neunyanzvi hwe +/- 100ml. Canisters ane akavaka-mumabhuraketi ekusimudza pamadziro, njanji zvitsigiso kana matiraki. Canisters dzinosanganisira reusable angled connectors kuti Vacuum Tubing.
Disposable kubvisa Suction B
Yakagadzirirwa kupa yepamusoro soro mashandiro uye nyore kushandisa, mabhegi ekusveta anowanikwa mu1000ml uye 2000ml saizi. Izvo zvakagadzirwa neyakaonda asi yakasimba polyethylene firimu, ichiita kuti iyo system ive yakachengeteka, yehutsanana uye yakasimba. Suction mabhegi haana PVC-yemahara uye anoshandisa mashoma epurasitiki pane akafanana zvigadzirwa. Kuderedza huwandu hwepurasitiki mukugadzira kunoita kuti mabhegi ekusvera ave akareruka uye anovabvumidza kuti vakwane munzvimbo shoma kana vakapakurwa. Izvi zvinogadzira kushanda zvakanaka mukugadziriswa uye kunoderedza kubudiswa kweCO2.
Inoraswa Kubvisa Bhegi A
1.Closed suction system ne PUSH BLOCK bhatani kudzikisira njodzi yekuyambuka-hutachiona.
2. Chechipiri 360°swivel adapter inopa yakakwana kunyaradzwa uye kushanduka kune vese varwere nevarapi.
3.Irrigation chiteshi yakashongedzwa neimwe nzira vharuvhu inobvumira zvakajairwa munyu kuchenesa catheter zvakanaka.
4.MDI chiteshi cheanoshanda zvakanyanya, nekukurumidza uye nyore kutakura zvinodhaka.
5.Iyo inoratidzirwa kwemaawa 24-72 anoramba achishandiswa.
6.Patient chitaridzi chine zuva rezvinamato zvevhiki.
7.Sterile, yega Peel pouches.
8.Soft asi yakasimba catheter sleeve.
Kubatanidza Tube NeYankauer Bata
1. Yankauer suction catheter inowanzo shandiswa pamwe nekuyamwa kubatanidza chubhu, uye inoitirwa kukweva iyo muviri yemvura pamwe neaspirator panguva yekuvhiya pane thoracic mhango kana dumbu mhango.
2. Yankauer Handle inogadzirwa neyakajeka zvinhu zvekuona zviri nani.
3. Masvingo akaomeswa ehubhu anopa simba rakakwirira uye anti-kinking.
Inoraswa Suction Bhegi D
1.Kushandisa kamwe chete, Kurambidzwa kushandisa zvakare.
2.Sterilized ne ethylene oxide haishandise kana kurongedza kwakakuvara kana kuvhurika.
3.Store pasi pemumvuri, inotonhorera, yakaoma, mweya uye yakachena mamiriro.